Jose Mourinho oo qorsheenaya in Paul Pogba uu qeyb kaga dhigo heshiiska xidig cusub uu ka doonayo Real Madrid. – Gool FM
Jose Mourinho oo qorsheenaya in Paul Pogba uu qeyb kaga dhigo heshiiska xidig cusub uu ka doonayo Real Madrid.
(Man United) 30 Maajo 2018. Wargeyska “Don Balon” ee dalka Spain ayaa wuxuu sheegay in Macalinka kooxda Manchester United ee Jose Mourinho uu doonayo in Pogba uu u adeegsado heshiiska uu Real Madrid uu kaga doonayo Gareth Bale.
Jose Mourinho ayaa wuxuu doonayaa inuu ka faa’ideysto hadalkii uu Gareth Bale shakiga ku galiyay mustaqbalkiisa Santiago Bernabéu, kadib finalkii Champions League.
Dhinaca kale Paul Pogba ayaa dhankiisa shaki la galinayaa inuu ka dhaqaaqi doono Manchester United, iyadoo ay wararku xaqiijinayaan inuusan dooneynin sii joogitaanka Old Trafford, sababa la xiriira khilaafka kala dhexeeya Jose Mourinho.
Sida laga soo xigtay wargeyska Mourinho ayaan dooneynin in Pogba uu sii joogo Old Trafford, wuxuuna haatan ku fikirayaa in Real Mardid uu la sameeyo heshiis ay isku dhaafsanayaan Gareth Bale iyo Paul Pogba.
Real Madrid iyo Barcelona oo ku dagaalamaya saxiixa xiddig muhiim u ah Juventus (Ma ahan Dybala)
Guardiola oo rajaynaya in Real Madrid ay ka hor istaagaan ku guulaysiga Champions League markii 4-aad oo xiriir ah, Muxuuse ka yiri saxiixa Isco?